Famonjena ho an'ny olona rehetra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > toriteny > Famonjena ho an'ny olona rehetra
Taona maro lasa izay dia nahare hafatra voalohany aho, izay nampionona ahy matetika. Mbola eritreretiko ho hafatra tena lehibe avy amin'ny Baiboly io. Ny hafatra dia izao: Andriamanitra hamonjy ny zanak'olombelona rehetra. Nanomana fomba hahazoan'ny olon-drehetra ho voavonjy Andriamanitra. Manatanteraka ny drafiny izy izao. Andeha aloha hojerentsika ny fomba famonjena miaraka ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. I Paoly dia mamaritra ny toe-javatra ahitan'ny olona ny tenany ao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana:
“Samy efa nanota izy rehetra ka tsy mahatratra ny voninahitra tokony hananany eo anatrehan’Andriamanitra” (Romana 3,23 Mpivarotra 2000).
Andriamanitra dia nikasa voninahitra ho an'ny olona. Io no iantsoantsika ny olona hoe fahasambarana, fanatanterahana ny faniriantsika rehetra. Saingy isika olombelona dia very na nandiso io voninahitra io tamin'ny ota. Ny ota no sakantsakana lehibe mampisaraka antsika amin'ny voninahitra, sakana iray izay tsy ho vitantsika mandresy. Nesorin'Andriamanitra tamin'ny alàlan'i Jesosy zanany io sakana io.
“Ary aoka ho marina tsy misy antony ny fahasoavany amin’ny fanavotana izay tonga amin’ny alalan’i Kristy Jesosy” (and. 24).
Koa ny famonjena dia lalana nomen’Andriamanitra ny olona mba hahafahany mahazo ny voninahitr’Andriamanitra indray. Iray ihany no nomen'Andriamanitra lalana iray, lalana iray, fa ny olona kosa dia miezaka manolotra sy misafidy lalana sy fomba hafa hahazoana famonjena. Izany no iray amin’ireo antony ahafantarantsika fivavahana maro be. Nilaza momba ny tenany i Jesosy ao amin’ny Jaona 14,6 hoy izy: " Izaho no lalana ». Tsy nilaza izy fa iray amin'ny fomba maro, fa ny lalana. Nanamafy izany teo anatrehan'ny Filankevitra ambony i Peter:
"Ary fa tsy misy hafa amin'ny famonjena (Fanavotana) koa tsy misy anarana hafa nomena ny olona ambanin’ny lanitra, izay hamonjena antsika » (Asan’ny Apostoly 4,12).
Nanoratra tamin'ny fiangonana tany Efesosy i Paoly hoe:
«Ianareo koa dia matin'ny fandikan-dalàna sy ny fahotanao. Koa tsarovy fa teraka mpanompo sampy ianao ary nantsoina hoe tsy voafora tamin'ireo voafora, fa tsy niaraka tamin'i Kristy tamin'izany fotoana izany ianao, tsy tafiditra amin'ny zon'olombelona sivily sy vahiny ary ivelan'ny fanekena ny teny fikasana; koa nanana izany ianao tsy misy fanantenana ary tsy nanana an’Andriamanitra teto amin’izao tontolo izao aho » (Efesiana 2,1 ary 11-12).
Mitady fomba hivoahana sy hisolo toerana sarotra izahay. Marina izany. Saingy raha ny ota dia safidy iray ihany isika: ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy. Tsy misy fomba hafa, tsy misy safidy hafa, tsy misy fanantenana hafa, tsy misy azo antoka afa-tsy ilay nokendren'Andriamanitra hatramin'ny voalohany: Ny famonjena amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy Zanany .
Raha mitadidy tsara io fahamarinana io isika dia hitadidy izany. Fanontaniana napetraky ny kristiana maro:
Ahoana ny havako maty izay tsy niova fo?
Ahoana ny amin'ireo olona an-tapitrisany maro izay mbola tsy naheno ny anaran'i Jesosy teo amin'ny fiainany?
Ahoana ny amin'ireo zaza tsy manantsiny maro izay maty nefa tsy nahafantatra an'i Jesosy?
Mila mijaly mafy ve ireo olona ireo satria tsy mbola nahare ny anaran'i Jesosy?
Betsaka ny valin'ireo nomena ireo fanontaniana ireo. Misy ny mino fa Andriamanitra ihany no te-hamonjy vitsivitsy, izay nofidiny sy nofantenany alohan'ny nanorenana izao tontolo izao. Ny sasany kosa mihevitra fa hamonjy ny olona rehetra amin’ny farany ny olona, ​​na tiany na tsia, fa tsy lozabe Andriamanitra. Betsaka ny aloka misy anelanelan'ireo hevitra roa ireo izay tsy hodinihiko izao. Manokan-tena ho an'ny tenin'ny Tenin'Andriamanitra isika. Maniry fanavotana ho an'ny olona rehetra Andriamanitra. Izao no sitrapony nambara, izay nosoratany mazava.
"Tsara izany sady ankasitrahan'Andriamanitra," ilay Mpamonjintsika izay maniry fa Allen Manampy ny olona ary tonga amin'ny fahalalana ny marina. Satria Andriamanitra io ary mpanelanelana amin'Andriamanitra sy olona, ​​dia ilay lehilahy Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany ho rehetra ho famonjena "(1. Timoty 2,3-6).
Nasehon'Andriamanitra mazava fa te hamorona famonjena ho an'ny rehetra izy. Tao amin'ny teniny koa dia naneho ny sitrapony fa tsy hisy ho very.
«Tsy mahahemotra ny toky ny Tompo araka ny fiheveran'ny sasany azy; fa manana faharetana aminao izy ary tsy maniry olona ho very , fa mba hahita fibebahana ny olona rehetra »(1. Petrus 3,9).
Ahoana no hampiharan'Andriamanitra ny sitrapony ankehitriny? Andriamanitra dia tsy manasongadina ny lafiny ara-nofo amin'ny teniny, fa ny fanoloran-kevitry ny zanany lahy kosa hamonjy ny olombelona rehetra. Natokana ho amin'ity lafiny ity isika. Tamin'ny batisan'i Jesosy, i Jaona Mpanao Batisa dia nanondro zava-dehibe iray:
"Ny ampitso dia hitan'i Jaona fa manatona azy Jesosy ary dia hoy izy: Indro ny Zanak'ondrin'Andriamanitra io, io izao tontolo izao Ny ota dia mitondra » (Johanes 1,29).
Jesosy dia nandray ny fahotan'izao tontolo izao, fa tsy ampahany amin'izany ota izany ihany. Nentiny avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ny lolompo rehetra, ny ratsy rehetra, ny fitaka rehetra ary ny lainga rehetra. Nitondra izao enta-mavesatra be izao eran'izao tontolo izao izy ary nijaly ny fahafatesana ho an'ny olona rehetra, ny sazin'ny ota.
«Ary ny fampihavanana ny fahotantsika, tsy ho antsika ihany, fa ho azy ireo koa manerana izao tontolo izao "(1. Johannes 2,2).
Tamin'ny alàlan'ny asany lehibe dia nosokafan'i Jesosy varavarana ho famonjena azy ireo ho an'izao tontolo izao, ho an'ny olona rehetra. Na dia eo aza ny lanjan'ny ota izay naterak'i Jesoa ary na dia teo aza ny fahoriany sy ny fijaliana tsy maintsy niaretany, dia nalain'i Jesosy tamin'ny zava-drehetra izany, noho ny fitiavana lalina antsika, noho ny fitiavana ny olona rehetra. Ilay soratra fanta-daza ao amin'ny fitantarana:
«Dia manana izany Andriamanitra tia an'izao tontolo izao dia nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay » (Jao. 3,16).
Nataony ho antsika «tsy finaritra» izany. Tsy hoe mionona amin'ny fahatsapana alahelo, fa avy amin'ny fitiavana lalina ny rehetra.
"Fa nahafaly an'Andriamanitra izany mba hitoeran'ny be dia be rehetra ao aminy (Jesosy) ary amin'ny alalany Izy nihavana ny zava-drehetra na ety an-tany, na any an-danitra, manao fihavanana amin’ny rany teo amin’ny hazo fijaliana » (Kolosiana 1,19-20).
Fantatsika ve io Jesosy io? Izy irery ihany no "mpamonjy ny olombelona rehetra, fa izy ihany koa no mamorona sy mpanohana azy. Izy ilay olona niantso antsika sy izao tontolo izao tamin'ny alàlan'ny teniny. Izy ihany koa no mamelona antsika, manome antsika sakafo sy akanjo, izay mitazona ny rafitra rehetra eny amin'ny habakabaka sy eto an-tany mba hananantsika. Nanasongadina ity tranga ity i Paul:
"Fa Ny zavatra rehetra dia noforonina ao aminy izay any an-danitra sy ety an-tany, ny hita maso ary ny tsy hita, dia seza fiandrianana na fanapahana na fahefana; Izy rehetra ary noforonina avy aminy. Ary ambonin'izany rehetra izany, ary ao aminy daholo izany » (Kolosiana 1,16-17).
Jesosy Ilay Mpanavotra, Mpamorona sy Mpiambina dia nanao fanambarana manokana taoriana kelin'ny nahafatesany.
«Ary rehefa asandratra tsy ho et the ambonin'ny tany aho dia maniry rehetra mifindra aty amiko. Nilaza izany Izy mba hanehoana ny fahafatesana izay ho faty » (Jaona 12,32).
Te hilaza i Jesosy fa "fisandratana" ny hazo fijaliana, izay nitondra ny fahafatesany. Naminany izy fa hampiditra ny olona rehetra amin'ity fahafatesana ity izy. Rehefa miteny ny tsirairay i Jesosy dia midika izany hoe olona rehetra, izy rehetra. Nahatsapa izao hevitra izao i Paul:
“Fa ny fitiavan’i Kristy no manery anay, indrindra fa satria matoky izahay fa raha maty ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, dia maty koa izy rehetra” (Isa.2. Korintiana 5,14).
Tamin'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia nitondra ny olona rehetra tamin'ny fahafatesana iray izy, satria Izy no nitarika azy rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Ny rehetra dia maty noho ny fahafatesan'ny Mpamonjiny. Ny fanekena io fahafatesana mahafaty io dia azo alaina amin'ny olon-drehetra. Tsy nijanona ho faty anefa i Jesosy, fa natsangana tamin’ny rainy. Tao anatin'ny fitsanganana amin'ny maty dia nahataona ny rehetra ihany koa izy. Hatsangana ny olona rehetra. Ity dia teny fototra amin'ny Baiboly.
“Aza gaga amin’izany. Fa avy ny andro izay handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy ireo, dia izay nanao tsara ho amin’ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho amin’ny fitsanganana ho amin’ny fitsarana. 5,28-9).
Jesosy dia tsy nilaza ny fotoana anaovana an'io fanambarana io. Tsy manonona Jesosy raha mitranga amin'ny fotoana hafa ireo fitsanganana roa ireo na amin'ny fotoana hafa. Hamaky andinin-teny vitsivitsy momba ny fitsarana isika. Eto isika dia aseho hoe iza no mpitsara.
«Satria ny ray tsy mitsara olona, ​​fa manana ny fitsarana rehetra natolotra ilay zanany lahy ka dia manaja ny zanany daholo. Izay tsy manaja ny zanany dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Ary nomeny fahefana hitana ny kianja izy satria zanak'olombelona izy » (Jaona 5, andininy faha-22-23 sy 27).
Ny mpitsara izay tompon'andraikitra rehetra dia i Jesoa Kristy, ilay mpamorona, mpanohana sy mpanavotra ny olona rehetra. Ny mpitsara dia mitovy toetra amin'ny olona rehetra izay maty ho an'ny olona rehetra, ilay mitondra fampihavanana ho an'izao tontolo izao, dia olona izay manome fiainana ara-batana ny olona rehetra ary mamelona azy. Afaka mangataka mpitsara tsara kokoa ve isika? Nanome fitsarana ny zanany lahy Andriamanitra satria izy dia Zanak'olona. Fantany ny dikan'ny maha-olombelona. Fantany tsara ny maha-olombelona antsika, dia iray amintsika. Fantany tsara ny herin'ny ota sy ny famitihan'i Satana sy ny tontolony. Mahafantatra ny fihetseham-pon'olombelona sy ny tosika izy. Fantany ny herin'asan'izy ireo, satria izy no namorona ny olona ary tonga olombelona toa antsika, saingy tsy misy ota.
Iza no tsy matoky io mpitsara io? Iza no tsy te-hanaiky ny tenin'ity mpitsara ity, miankohoka eo anatrehany ary miaiky ny helony?
«Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mihaino ka mino ny teniko ho any amin'izay naniraka ahy manana ny fiainana mandrakizay izy ary tsy hohelohina, fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana” (and 24).
Ny fitsarana hataon'i Jesosy dia ho rariny tokoa. Ny toetra tsy manavakavaka, ny fitiavana, ny famelan-keloka, ny fangorahana ary ny famindram-po.
Na dia namorona ny fepetra tsara indrindra ho an'ny olombelona rehetra aza Andriamanitra sy i Jesoa Kristy Zanany, dia misy olona tsy hanaiky ny famonjeny. Andriamanitra tsy hanery azy ireo ho sambatra. Hijinja izay nafafiny izy ireo. Rehefa vita ny didim-pitsarana dia misy vondrona roa monja amin'ny olona, ​​satria nametraka izany tao amin'ny iray amin'ireo bokiny i CS Lewis:
Ny vondrona iray dia hiteny amin'Andriamanitra hoe: Hatao ny sitraponao.
Andriamanitra dia hiteny amin'ny vondrona hafa hoe: Hatao ny sitraponao.
Fony tany an-tany Jesosy dia niresaka momba ny afobe, momba ny afo mandrakizay, sy ny fikitroha-nify sy ny vazivazy. Niresaka fanamelohana sy sazy mandrakizay izy. Fampitandremana ho antsika io, mba tsy hihelingantsika ny fampanantenan'Andriamanitra famonjena. Ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, ny fanamelohana sy ny helo dia tsy atao mialoha, ny fitiavana sy ny fangoraham-po ho an'ny olona rehetra dia miorina mialoha. Maniry fanavotana ho an'ny olona rehetra Andriamanitra. Izay tsy te-hanaiky izany fitiavana sy famelan-keloka izany no manana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hisy olona hiharan'ny fanasaziana mandrakizay raha tsy faniriana mivantana izany. Tsy manameloka an'iza izay tsy mbola nanana fahafahana nianatra momba an'i Jesosy sy ny asany famonjena ity Andriamanitra.
Ao amin'ny Baiboly no ahitantsika ny fizarana roa amin'ny fitsarana eran-tany. Hitantsika ao amin'ny Matio 25 ary ny iray hafa ao amin'ny Apokalypsy 20. Manoro hevitra aho hamaky azy io. Izy ireo dia mampiseho amintsika ny fomba fijerin'i Jesosy hitsara. Ny fitsarana dia aseho ho toy ny hetsika izay atao amin'ny fotoana iray. Te-hitodika any amin'ny soratra masina izay manondro isika fa ny fitsarana dia afaka midika hoe lava kokoa ny fotoana.
“Fa tonga ny andro hanombohan’ny fitsarana ao an-tranon’Andriamanitra. Fa raha isika no voalohany, hanao ahoana no hiafaran’izay tsy mino ny filazantsaran’Andriamanitra? »1. Petrus 4,17).
Ny tranon'Andriamanitra dia ampiasaina eto ho toy ny anarana ho an'ny fiangonana na ny vondrom-piarahamonina. Miatrika fitsarana izy anio. Nandre sy nanaiky ny antson'Andriamanitra ny kristiana tamin'ny androny. Fantatrao an'i Jesosy ho Mpamorona, Mpiambina ary Mpanavotra. Mandeha ho azy ireo ny fitsarana. Ny tranon'Andriamanitra dia tsy tsaraina velively. Jesosy Kristy dia mampiasa fenitra mitovy ho an'ny olona rehetra. Hita avy amin'ny fitiavana sy ny famindram-po izany.
Ny tranon'Andriamanitra dia nomen'ny Tompony hanampy azy hamonjy ny olombelona rehetra. Nantsoina hitory ny vaovao tsara momba ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny mpiara-belona amintsika isika. Tsy ny olona rehetra no mahatsikaritra an'io hafatra io. Maro no manambany azy, satria adala izy, tsy misy miraharaha na tsy manam-pahendrena. Tsy tokony hohadinointsika fa adidin'Andriamanitra ny mamonjy olona. Mpiasa azy izahay, ary matetika manao fahadisoana. Aoka tsy ho kivy isika raha tsy toa mahomby ny fahombiazan'ny asantsika. Miasa foana Andriamanitra ary miantso ary manambana ny olona aminy. Hitan'i Jesosy fa ho tonga any amin'izay alehany ny olona antsoina.
«Tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy taomin’ny Ray Izay naniraka Ahy, ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany. Izay rehetra omen'ny raiko ahy dia tonga amiko; ary na iza na iza manatona Ahy dia tsy horoahiko hiala. Fa tsy tonga avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka Ahy. Fa izao no sitrapon’izay naniraka Ahy, dia ny tsy hamelako hisy very na inona na inona amin’izay nomeny Ahy, fa ny hatsangako izany amin’ny andro farany” (Jaona. 6,44 ary 37-39).
Aoka isika hametraka ny fanantenantsika rehetra amin’Andriamanitra. Izy no Mpamonjy, Mpamonjy ary Mpanavotra ny olona rehetra, indrindra fa ny mino. (1. Timoty 4,10) Aoka isika hihazona izany fampanantenana avy amin’Andriamanitra izany!